ကို ကြီး တောင် ကြည့် မယ်နော် – Hlataw.com
ကျနော် နာမည်က ကိုကိုကြီး….. အသက် ၄၀ အိမ်ထောင်ကျဘူးတယ်….. အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာ. … သားသမီး ၃ ယောက်ရှိတယ်….. လက်ရှိ လုံခြုံရေးကင်းတစ်ခုရဲ ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ ကျနော်နေတဲ့မြို့လေးက သိပ်မကြီးတော့…. ကင်းစခန်းတခုလုံးမှာလူ ၂၀ လောက်ဘဲ ရှိတယ်လေ…….. တစ်နေ့တော့ ကျနော်တို့ကင်းစခန်းကို နောက်ထပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်အိမ်ထောင်သည်မိသားစု တစ်ခုပြောင်းလာတယ်…… အဲမှာ ကျနော်ဘ၀ရဲ့ပထမဝေဒနာစတော့တာပေါ့…… ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကို နေအိမ်လိုင်းခန်းချပေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်တာနဲ့… ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကို တစ်ခန်းခွဲပေးလိုက်တယ်…. နယ်ကင်းစခန်းဆိုတော့ လိုင်းခန်းလဲ ပေါပေါများများ မရှိဘူးလေ….. ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကလဲ… ကင်းစခန်းဘေးကပ်လျှက်…. ကျနော်ရုံးကိစ္စလုပ်ဖို့နဲ့ အနားယူဖိုယူထားတာပါ….. ကျနော်က မြို့ထဲမှာအိမ်ရှိတယ်…… ကင်းစခန်းထဲမှာက နေ့ဘက်လောက်ပဲ နေတာများတယ်လေ….. အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ မိသားစုကို တစ်ခြမ်းခွဲပေးပြီး ကျနော်က တစ်ခြမ်းနေလိုက်တယ်…….။
ကျမနာမည်ကဖြူစင်ပါ….. အားလုံးကမဖြူလို့ဘဲ ခေါ်ကြတယ်လေ……ကျမအမျိုးသားက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း မြန်မာပြည်အနံ့ ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူပေါ့…. ကျမတို့မှာ သားသမီး ၂ ယောက်ရှိပီး… သမီးအကြီးက သူအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ ရန်ကုန်မှာနေတယ်…. သားအငယ်ကတော့ ကျမတို့နဲ့ အမြဲလိုက်နေတယ်လေ…. သူက အခုမ (၅)တန်း…. ကျမတို့ဒီမြို့လေးကို ပြောင်းလာတော့…. ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)က လိုင်းခန်းမရှိလို့ သူယူထားတဲ့အခန်းကို တစ်ခန်းခွဲပေးတယ်…. ကျမတိုကမိသားစု ၃ ယောက်ထဲဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ… သူကလဲ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူ…. ညဘက်မြို့ထဲကအိမ်မှာ အိပ်တာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ….. ကျမအကြောင်းပြောရရင် ကျမတို့လင်မယားက သားလေးမွေးပီးကတည်းက နောက်သားသမီးမရအောင် လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးရင်သုံး…. မဟုတ်ရင် အပြင်ကို ထုတ်ပစ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ထားတယ်…… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမက တားဆေးတွေနဲ့ မတည်လို့…. နောက်ပီး ပစ္စည်းထည့်ရမှာလဲ ကြောက်လို့…. အဲလိုနေလာတာ…. သားလေးတစ်သက်လို့ ပြောလို့ရတယ်…….ကျမတို့ဒီကို ပြောင်းလာပီး ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)က အစစအရာရာ ကူညီတယ်… ကျမအမျိုးသားကိုလဲ နေရာပေးတယ်…… ပြောရရင်တော့… သူက ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်လို့ ပြောရမလိုပေါ့နော်….. လိုင်းခန်းတစ်ခုထဲမှာ အတူနေတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေထက် ကျမတို့က ပိုရင်းနှီးတယ်ပြောရမှာပေါ့….
ဖြူလေးတို့မိသားစုရောက်လာပီး ကျနော်အရင်လို မပျင်းတော့ဘူးပြောရမှာဘဲ…. ဖြူလေးနဲ့ နေ့ဘက်တွေမှာအတူနေရတာ သူလုပ်ပေးတဲ့ လဘက်ရည်သောက်လိုက် အသုပ်လေးတွေ စားလိုက်နဲ့ တော်တော်ရင်းနှီးလာတယ်… သူကလဲ ကိုကြီး… ကိုကြီးနဲ့ သူယောကျာင်္းကလဲ ကျနော်နေရာပေးထားတော့ ပိုဂရုစိုက်တာလဲ ပါမှာပေါ့……. ဖြူလေးက သာမာန်ပါဘဲ… မျက်နှာလေးက ချောချော ရင်သားကြီးကြီးနဲ့ တင်တော့ပြားတယ်….. ကလေး အမေ ဆိုပေမယ့် ပြုပြုပြင်ပြင်နေတော့ ကြည့်လိုကောင်းတယ်.. ၀တ်တာစားတာကလဲ ဆက်ဆီ ကျတယ်…. ဘောင်းဘီအပျော့တွေ ဂါဝန်တွေ အမြဲဝတ်တတ်တယ်… သူများတွေလို ထမီတွေဘာတွေ မ၀တ်တော့ အမြင်ပိုဆန်းတယ် ပြောရမှာဘဲ…. ရင်းနှီးရာကနေ စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ် ….. ဘာလိုလဲဆိုတော့ ဖြူလေးဘောင်းဘီနဲ့ထိုင်နေရင် သူ့ဂွဆုံကို ကျနော်ကြည့်မိသလို ရင်သားကြီးတော့ အစ်ထွက်နေတဲ့ ဖြူလေးရဲ့ရင်သားတွေကိုလဲ အမြဲကြည့်ကြည့်ပီး ဖီးတက်လာတယ်……. ကျနော်က ပြည်နယ်ရုံးကို ခဏခဏသွားရတော့ ပြည်နယ်က ပြန်လာတိုင်း ဖြူလေးတို့သားအမိအတွက် အ၀တ်အစားတွေ ၀ယ်ဝယ်လာတတ်တော့ ကျနော်သွားတိုင်း ဖြူလေးက တခုခုမှာတတ်တာ အကျင့်လို့ဖြစ်နေတယ်လေ…
ကျနော်ဝယ်လာတိုင်း သူနဲ့မတော်တာ မကိုက်တာက ခပ်များများဆိုတော့ သူအတိုင်း အထွာတွေကို ကျနော်ကို ပြောပြောမှာတတ်တယ်…….. ကျနော်ဖောက်ပြန်နေတာ ဖြူလေးက မသိပေမယ်. ကျနော်စိတ်ကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ ဖြူလေးကို သိမ်းပိုက်ချင်စိတ်ပိုလာတာ ကျနော်သိတယ်…. ကျနော်ဖြူလေးကို ဘယ်လိုကြံရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရင်းက… တစ်နေ့ကျနော်ပြည်နယ်ကို မနက်ဖြန်သွားရမယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ ဖြူလေးအမျိုးသားကို တောဘက်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကျနော်ခိုင်းလိုက်တယ်…… အိမ်မှာ ဖြူလေးနဲ့ကျနော်ဘဲ ကျန်ခဲ့တယ်…… နေ့ဘက်ကျနော်က ဖြူလေးတို့နဲ့ လိုင်းခန်းတခုထဲ အတူနေတာဆိုတော့ သူယောကျာင်္းမရှိလဲ သိပ်တော့မထူးဘူးပေါ့…… ဖြူလေးက ရေမိုးခြိုးပီး အလှတွေပြင်လို့…. သူ့ထုံးစံအတိုင်း… အောက်ကစပန့်ဘောင်းဘီရှည်ပျော့လေးနဲ့ လှနေတယ်… ကျနော်လဲ အအေးဘူးကို လှမ်းပေးပီး….. “ဖြူလေးရေ ဒီမှာအအေးဖြူဖို့ယူလာတာ သောက်လိုက်အုန်း”ကိုကြီးရုံး စာရင်းတေ လုပ်လိုက်ဦးမယ် “အော်ကိုကြီးကလဲ ဟုတ်ဟုတ်” ဖြူလေးအအေးဘူးကို သောက်ရင်း တီဗီ ထိုင်ကြည့်နေတယ်…သူကြည့်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားကားက ၁၈ပလပ်ဆန်တော့ ဟိုခန်း ဒီခန်းတေပါတယ်.. ကျနော် လည်း မသိချင်ရောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်.. ဖြူလေးက အရသာခံပြီး မကျော်ဘဲထိုင်ကြည့်နေတယ်….
ခဏနေတော့ ဖြူလေးချွေးဆေးလေးတွေထွက်ပြီး ပေါင်တွေ လိမ်လိုက်ကားလိုက် လုပ်နေတာမြင်ရတော့ ကျနော်စဖို့ အချိန်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်……… “ဖြူလေး ကိုကြီးမနက်ဖြန် ပြည်နယ်ရုံးသွားမှာ ဖြူလေးဖို့ဘောင်းဘီဝယ်ခဲ့မယ် ဟုတ်ပလား” “နေပါစေကိုကြီး အားနာစရာ” “ဘာအားနာရမှာလဲ ဖြူလေးကလဲ…. ဖြူလေးအရှည်ဘယ်လောက်ဆိုတာ ပြောလိုက်အုန်း” “ဟိုတခါလို မကိုက်ဘဲနေအုန်းမယ်” “ကိုကြီးဘာသာတိုင်းသွားတော့……” လို့ပြောတာနဲ့ကျနော်လဲ အလုပ်လုပ်နေရာကနေ ထပြီး ဖြူလေးထိုင်နေတဲ့နေရာကို သွားလိုက်တယ်… “ထ ဖြူလေးဟုတ်တယ် တိုင်းသွားမဖြစ်မှာ.. တော်ကြာ ဟိုတခါလို မကိုက်ဘဲ နေလိမ့်မယ်” လိုပြောပီး ဖြူလေးကို ပခုန်းလေးနှစ်ဖက်ကိုင်ပြီး ထူလိုက်တယ်…. ဖြူလေးအလိုက်သင့် မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့မှ ကျနော်လဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ပီး…… “မှန်း ဘယ်လိုတိုင်းသွားရမလဲ…. နေအုန်း အောက်ကနေ ကိုကြီးတောင်ကြည့်မယ်နော် ဖြူလေး” “ရှင်….” “အော် တစ်ထောင်နဲ့ဘယ်နှစ်တောင်ဆိုတာကို ပြောတာ” “အော် ဟုတ် ကိုကြီး” ဆိုပြီး ဖြူလေးက မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ကြည့်နေတုန်း ကျနော်လဲထိုင်လိုက်ပြီး ဖြူလေးခြေတောက်ကနေ အထက်ကို တစ်တောင်၊ နှစ်တောင်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသူပေါင်လေးတွေကို ကိုင်ရင်းလုပ်နေတော့ ဖြူလေးတုန်ကနဲ ဖြစ်ပီး ညိမ်နေတာနဲ့…… “ဖြူလေးဟိုဖက်လှည့်လိုက်…” လို့ပြောလိုက်တော့ ဘာမပြောဘဲ လှည့်ပေးတယ်….
ကျနော်လဲအစကနေပြန်ပြီး တစ်တောင်၊ နှစ်တောင်ဆိုပြီး တိုင်းရင်း ဖြူလေး ဖင်သားလေးတွေကို ရဲရဲတင်းတင်း ကိုင်လိုက်တယ်.. “အ…ကိုကြီး….ဟို” ဖြူလေးတစ်ခုခုပြောဖိုလှည့်အလာ ကျနော်လဲ မတ်တပ်ရပ်ပီး လှည့်လာတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကို မေးကနေကိုင်ပီး နှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံစုပ်လိုက်တာပေါ့..လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြန်သွားသလို ကျမခံစားလိုက်ရတာပါဘဲရှင်……။ ဖြူလေးနှုတ်ခမ်းတွေကိုငုံစုပ်ရင်း ကျနော်ဒူးကွေးလိုက်တယ်…. ပီးတော့ ဖြူလေးနဲ့ စပန်ဘောင်းဘီးအပျော့လေးဝတ်ထားတဲ့ ဖင်ကြားလေးထဲကို နောက်ကနေ ကျနော့လီးကြီး ထောက်ပေးထားလိုက်ရင်း ဖြူလေးနို့တွေကို ဖြစ်ညစ်ရင်း အနမ်းရှည်းကြီးပေးနေတာပေါ့…. ဖြူလေး ဘာမပြန်မပြောနိုင်ဘဲ ခေါင်းလေး နောက်လည်ပြန်ရင်း ဖင်လေးကို နောက်ကောက်ပေးလာတာတွေ့လိုက်ရတယ်… ကျနော်စိတ်တွေ အရမ်းဟော့လာတော့ ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်ပီး လီးကြီးကိုထုတ်ကိုင်…. ဖြူလေးဖင်သားလေးနှစ်ခြမ်းကို လက်နဲ့ကိုင်ဖြဲပီး လီးကြီးကိုထောက်ထားလိုက်တယ်..
“အ….အင်းးးးး…..” ဖြူလေး မပိမသအသံများသာထွက်ရင်း ဖင်လေးကို ကော့ကော့ပေးနေတာပေါ့….. စပန့်သား ဘောင်းဘီအပျော့လေးဆိုတော့ ဖင်သားတွေရဲ့ နူးညံ့မှုကို အပြည့်အ၀ခံစားနေရသလို ဖြူလေးလဲ ကျနော်လီးအနွေးဓါတ်ကို သိနေပီလေ….. ကျနော်ဖြူလေးဖင်သားတွေကို ကိုင်ဖြဲထားရာကနေ လက်တွေကို ရှေ့ဖက်ပို့ပြီး ဖြူလေးစောက်ပတ်ကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ဖြူလေးဒူးတွေညွတ်မလို ဖြစ်သွားတယ်.. ကျနော်ထိန်းကိုင်ရင်း ဖြူလေးကို သူတို့လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းထဲ နမ်းရင်း ပွတ်ရင်း တွန်းရင်း ခေါ်သွားလိုက်တယ်…. အခန်းထဲ ကုတင်နားရောက်တော့ ဖြူလေးကို အသာတွန်းပြီး ကုတင်ပေါ်မှောက်လိုက်တယ်….. ဖြူလေးကုတင်ပေါ် အပေါ်ပိုင်းမှောက်ရင်း မှိန်းနေတုန်း ကျနော်နောက်ကနေထိုင်ပြီး ဘောင်းဘီလေးကို စွဲချွတ်လိုက်တယ်…..။ “ကိုကြီး…ကိုကြီး…ဖြူလေ….” “ဖြူလေး…ချာတိတ်..ကိုကြီးကိုခွင့်လွတ်ကွာ… ကိုကြီးဖြူလေးကို ချစ်နေတာကြာပီ့….” လိုပြောရင်း ဖြူလေးဖင်ကြားလေးထဲကနေ နောက်ကို ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လှမ်းယက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ…. ဖြူလေး အား လိုအော်ရင်း စကားလုံးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပေါ့….။
ကျနော် ဖြူလေးရဲ့ဖင်ကိုဖြဲရင်း ကြားထဲက ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို စိတ်ကြိုက်ယက်လိုက် အပေါက်လေးထဲကို လျှာချွန်ပြီးကလိလိုက် လုပ်နေရာကနေ အသာရပ်ပီး ကျနော်လီးကြီးကို ဖြူလေးစောက်ပတ်ဝလေးတေ့ကာ အသာဒစ်ကလေးစသွင်းလိုက်တယ်…..။ “အား…ရှီး……ကိုကြီး…အ…အ..” “ဖြူလေးရယ်…ချာတိတ်ရာ…..” ကျနော်သူနာမည်ကို တတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း နောက်ကနေ ဖြူလေးဖင်သားလေးတွေ ပွတ်သပ်ချော့မြှူရင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်ကာ လီးကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်…… “အား….ကြပ်တယ်…..အား…” ကျမ ကိုကြီးရဲအပြုအစုအယုအယတွေအောက်မှာ နစ်မြောရင်း အိမ်ခန်းထဲက ကျမတို့လင်မယားအိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ်ကို မှောက်ရက်ကလေး ရောက်သွားတော့တယ်…… အပေါ်ပိုင်းက ကုတင်ပေါ်မှောက်နေပီး အောက်ပိုင်းကတော့ ကုတင်အောက်မှာ…… အဲအချိန်မှာဘဲ ကိုကြီးက ကျမစပန့်သား ဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ရင်း ကျမကို ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်း ကျမဖင်သားလေးတွေကို ကိုင်ဖြဲကာ သူ့လျှာကြီးနဲ့ ကျမဟာလေးကို နောက်ကနေ လှမ်းယက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာ ရင်ထဲ ဗျောင်းဆန်ခတ်ကာ မွေ့ယာခင်းကို လက်တွေနဲ့စုပ်ကိုင်ရင်း ဖင်လေးကို နောက်ကော့ပေးမိတော့တယ်… အိမ်ထောင်သက်တွေကြာပေမယ့် ကျမယောကျာင်္းက အဲလိုတွေ မလုပ်တတ်သလို သူဆန္ဒရှိတဲ့အခါ အပေါ်ကနေတက်လုပ်ရင်း ပီးခါနီးရင် အပြင်ထုတ်ပီးလိုက်တာက များတယ်…. အခုလို လျှာနဲ့ယက်ပေးတယ်ဆိုတာ ပြောသံတွေ နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေထဲမှာ တွေဖူးမြင်ဖူးပေမယ့် တကယ်ခံစားတဲ့အခါ ဒီလောက်ကောင်းလိမ့််မယ်လို့ ထင်မထားမိဘူးလေ…… ခဏနေတော့ ကိုကြီးမတ်တပ်ရပ်လိုက်တာ သထိထားမီတယ်… ကျမအရမ်းလိုချင်နေပီဆိုတာ ၀န်ခံရမှာဘဲ… သူကျမကိုလိုးတော့မယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ကျမတားမြစ်ဖို့ ခွန်အားမဲ့နေတာသိတယ်…။
ကိုကြီး သူ့လီးကြီးကို ကျမဖင်ကြားကနေ ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်ပ၀လေးကို ထောက်လိုက်တယ်…. ပီးတော့ စလိုးပါတော့တယ်…. ကိုကြီးလီးဟာ ကျမယောကျာင်္းလီးထက် တော်တော်ပိုကြီးတာ ကျမဖင်ကြားကို ဘောင်းဘီပေါ်က ထောက်ကထဲကသိတယ်…. ဒါပေမယ်… စောက်ပတ်ထဲဝင်လာတော့ ကျမထင်တာထက် ပိုကြီးတာ သိလာတယ်… အရမ်းကြပ်ပီး ပြည့်သိပ်နေတာ ခံစားရယ်လေ….။ ကျနော်ဖြူလေးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးရင်းကနေ လီးတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ ခပ်သွက်သွက်လေးလိုးရင်း ဖြူလေးဖင်ကိုဖြဲကာ အဆုံးထိတစ်ရစ်ချင်းထည့်လိုက်တယ်…. “အား….ဖြေးဖြေးကိုကြီး…အရမ်းကြပ်တယ်..” “ဖြူလေးပေါင်ကားလိုက်…နော်ချာတိတ်…. အား ဖြူလေးစောက်ပတ်က… အရမ်းကြပ်တာဘဲကွာ..” ကျနော်ဖြူလေးကိုပေါင်ကားဖိုပြောရင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဖြူလေးပေါင်တွေကို ဆွဲကားပေးလိုက်တယ်… ဖြူလေးလဲ အလိုက်သင့်ကားရင်း ခြေဖြားလေးထောက်ပီးဖင်ကို အပေါ်ကော့ပေးလာတော့ လိုးရတာ ပိုအဆင်ပြေပီး အ၀င်ချောလာတယ်… ဖြူလေးစောက်ပတ်ထဲကလဲ စောက်ရည်တွေထွက်နေပီဆိုတော့ တအားကြပ်မနေတော့ဘဲ အ၀င်အထွက် ချောလာတာနဲ့ ကျနော်လဲအဆုံးထိ ထည့်ပေးလိုက်တယ်.. “အား…အထဲကိုထိတယ်…ကိုကြီး… အား.. အောင့်တယ်…” ဖြူလေးအတွင်းသားအိပ်ကို ထိပုံရတယ်…. ဖြူလေးက အရပ်ပုတော့ သားအိပ်နိမ့်ပုံရတယ်…
ကျနော်လဲလီးထိပ်ကို တစ်ခုခုထိမှန်း သိတယ်.. ကျင်ကနဲ့နေ သွားတာကို….. ဒါနဲ့ ဖြေးဖြေးလေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်းကနေ ဖြူလေးအင်္ကျီကို ချွတ်ရင်း နောက်ကနေ ဘော်လီချိတ်တွေ ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်….. အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ မှောက်ခုံလေးအလိုးခံနေတဲ့ဖြူလေးကို အသာမပြီး သူနိုတွေကို နောက်ကနေ လှမ်းချေပေးလိုက်တယ်… “ဗွတ်….ဗွတ်….အ….အင့်အင့်… အား…အ…အ…..” ဖြူလေးစီက ဘာမှန်းမသိရတဲ့ အသံတွေထွက်ရင်း ကျနော့်လိုးချက်တွေကို ခံနေရှာတယ်….။ “ဖြူလေး….အား…ကိုကြီးပီးတော့မယ်နော်…” “အား….အပြင်ထုတ်နော် ကိုကြီး…ဖြူ…. ဆေးလဲ မစားဘူး…ထိုးလဲ မထိုးထားဘူး” “ဖြူ စိတ်ချ…ကိုကြီးက သားကြောဖြတ်ထားတာ…. စိတ်မပူနဲ့ နော်ဖြူလေး” “အား…ဖြူကြောက်တယ်နော်ကိုကြီး…” “စိတ်ချပါ…ဖြူဗိုက်မကြီးစေရဘူး… ကိုကြီးသားကြောဖြတ်ထားတာ” ပြောရင်းအဆက်မပြတ် ကျနော်လိုးနေမိတယ်…. ဖြူလေးလဲ စိတ်ထနေပီဆိုတော့ ဖင်ကို နောက်ကော့ရင်း ပြန်စောင့်စောင့်ပေးနေတယ်… “ဖြူလေး….အား…ကောင်းလိုက်တာကွာ” “ကိုကြီး…နဲနဲစောင့်ပေး…ဖြူထွက်ချင်ပီး… အ..အား… ဟုတ်တယ်… စောင့်ကိုကြီးအား…အ” “ကိုလဲပီးပီ…အား…” ပြောရင်းကျနော်သုတ်ရည်တွေကို ဖြူလေးစောက်ပတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်မိတယ်….။
ကိုကြီး လိုးလာလိုက်တာ သူ့လီးကြီး ကျမထဲအဆုံးဝင်တဲ့အထိပေါ့. သူလီးက ရှည်လဲရှည်တော့ ကျမသားအိမ်ကို ထောက်မိတယ်… ကျင်ပီး အောင့်သွားတာဘဲ… ကျမပြောလိုက်တော့မှ သူနဲနဲလျော့သွားတယ်.. ကိုကြီးပီးတော့မယ်ဆိုတော့မ ကျမလန့်သွားတယ် …. ကျမက ဆေးမတည့်ဘူးလေ… ဆေးလဲမစား ထိုးလဲမထိုးတော့ ကိုကြီးကိုအပြင်မှာ ပီးဖို့ပြောလိုက်တယ်.. ကိုကြီးက သားကြောဖြတ်ထားတယ်တဲ့….. ကျမလဲ နဲနဲတော့ စိတ်အေးသွားတယ်…. နောက်ဆုံး ကိုကြီးပီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျမကိုကြီးကို ဆွဲလမ်းသွားတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံရမလိုဘဲ…….. ဘာလို့လဲဆိုတော့… ကိုကြီးလရည်တွေ ကျမစောက်ပတ်ထဲကို အလုံးလိုက် အရင်းလိုက် ပန်းထည့်လိုက်တဲ့အရသာဟာ ဘာနဲ့မလဲနိုင်အောင်ပါဘဲ… ကျမအဲလိုအပန်းမခံရတာ နှစ်တွေ အတော်ကြာခဲ့ပီလေ…. အဲလိုပန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျမအပြည့်အ၀ ပီးသွားတာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားလိုက်ရတယ်..။ “အားဖြူလေးရယ်…” ကိုကြီးကျမအပေါ် မှောက်ရက်လေး ထပ်ကျလာရင်း သူလီးကြီး တပ်ရက်မှီန်းနေတယ်…..။
“ထတော့ကိုကြီး….တစ်ယောက်မြင်သွားလိမ့်မယ်” အစက တဏှာစိတ်မွန်နေပေမယ့် အခုတော့ လန့်ရမှန်း ကျမသိသွားတယ်… ကိုကြီးလဲ ချက်ချင်းထပြီး ပုဆိုးပြန်ဝတ်လိုက်တယ်.. ကျမလဲ ဘောင်းဘီပြန်ဝတ် အကျီင်္ပြန်ဝတ်ပီး ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေလိုက်တယ်.ကိုကြီးကတော့ အပြင်ထွက်သွားပီး အိမ်ရှေ့ခန်းက သူအလုပ်စားပွဲမှာ ထိုင်နေတယ်….. ကိုကြီးနဲ့ကျမ အခုလိုဖြစ်ပီး မျက်နှာပူတာနဲ့ ကျမလဲ ရှောင်နေလိုက်တယ်.. သူပြည်နယ်ရုံးက ပြန်လာပီး ကျမအတွက် ဘောင်းဘီအရှည်အတိုတွေ အကျီင်္တွေ အစုံဝယ်လာသလို သားလေးအတွက်လဲ ကစားစရာနဲ့ မုန့်တွေ ၀ယ်လာတယ်…… ပီးတော့ အိမ်ရှေ့မှာထားပီး ပြန်ထွက်သွားတယ်… ကျမအမျိုးသားနဲ့တော့ ပုံမှန်အတိုင်းစကားပြော အလုပ်အတူလုပ်နဲ့ သူမဟုတ်သလိုဘဲ…. ကျမလဲနှစ်ရက်လောက်ရှိတော့….ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားပီး မျက်နှာပူတာရှန့်တာ မရှိတော့ဘူး… ဒီနေ့ထုံးစံအတိုင်း ကျမနေ့လည်ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲပီးချိန် ကိုကြီးအိမ်ကို ရောက်လာတယ်….. သူရုံးအလုပ်တွေ ထိုင်လုပ်နေတာပေါ့….. ကျမယောကျာင်္းကတော့ မြို့ထဲကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့.. ကျမအခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ပေါ့တေးဘဲလ်လေးနဲ့ ကိုရီးယားကား ကြည့်နေတုန်း ဖုန်းမည်လာတာနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဖုန်းနံပါတ်က ကိုယ်မသိတဲ့ဖုန်း…. ဘယ်ကဖုန်းလဲဆိုပီး ကိုင်လိုက်တာပေါ့…
“ဟလို….ပြောပါရှင်” “ချာတိတ်…ကိုကြီးပါ…..” ကျမရင်ထဲ ထိတ်ကနဲ့ဖြစ်သွားသလို လက်တွေလဲ တုန်နေတာပေါ့….. ကိုကြီးဖုန်းဆက်လာလိမ့်မယ်လိုလဲ မထင်ဘူးလေ…. “ဟုတ်….ပြောပါ…” “စိတ်ဆိုးတုန်းလားဟင်.. ချာတိတ်” “မဆိုးပါဘူး….” ကျမဒီစကားလုံးဘယ်လိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘဲ အလိုလိုထွက်သွားတယ်….. “၀မ်းသာလိုက်တာ ချာတိတ်ရာ…. အပြင်ထွက်ခဲ့ပါ့လားဟင်…” “အာကိုကြီးကလဲ….ဘာလုပ်ဖိုလဲ” “မျက်နှာလေးမြင်ချင်လိုပါကွာနော်… ထွက်ခဲ့နော် ချာတိတ်” ဆိုပီးဖုန်းချသွားတယ်.. ကျမလဲ ထွက်ရမလား မထွက်ရမလား ဝေခွဲမရဖြစ်နေသလို ရင်တွေလဲခုန်နေတယ်။ ထွက်လိုက်ရင် ငါ့ကို သူတစ်ခုခုလုပ်မှာလား…. အို.. ကျမစိတ်တွေ ဟိုပြေးဒီလွှားနဲ့ အကြောင်းမဲ့လက်တွေချိုးရင်း စဉ်းစားနေတာပေါ့…..အဲချိန်မှာဘဲ ကျမအခန်းရဲ့ ခန်းစည်းလိုက်ကာလေး လှုပ်သွားတာမြင်လိုက်ရသလို အပေါက်ဝမှာ ကိုကြီးမျက်နှာကို မြင်လိုက်ရတယ်..ကျမလဲ ရင်တွေတုန်လွန်းလို့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ချက်ချင်းထထိုင်လိုက်မိတယ်… “ကိုကြီး….အခန်းထဲမ၀င်နဲ့…. တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားရင် အကုန်ခက်ကုန်မယ်နော်…” “ဒါဆို ချာတိတ်ထွက်လာခဲ့လေ” တဲ့…. ကျမလဲ မထွက်ရင်သူဝင်လာမယ်ဆိုတာ သိနေတော ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပီး အိမ်ရှေ့သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ စားပွဲနားကိုသွားထိုင်လိုက်ရင်းကနေ…. “ပြော….ဘာပြောမလို့လဲ” လို့မေးလိုက်ရင်ဘဲကိုကြီးက ကျမကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပီး မျက်နှာလေးကို မေးကကိုင်မော့ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက်တယ်…
ကျမတိမ်တွေ ပေါ်ရောက်သွားသလို အမြင်ကြီးက ပြုတ်ကျသလို…. အိုးးးးးး…… ခံစားမှုအနိမ့်အမြင့်အစုံနဲ့ နစ်မျောနေတာပေါ့…. ကိုကြီးလက်တွေကလဲ ကျမရဲနို့တွေကို အကျီင်္ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ချေမွနေတယ်….. ပီးတော့ လက်တွေကအောက်ကို ဆင်းသွားပီး ကျမဂါဝန်ပေါ်ကနေ ဖင်သားတွေကိုဖြစ်လိုက် ပေါင်တွေကို ပွတ်လိုက်နဲ့ ကျမကို ပြုစားနေတာပေါ့…..။ “အား…ကိုကြီး…တော်ပါတော့… တော်ကြာ ကိုမျိုးပြန်လာလိမ့်မယ်” “မလာသေးပါဘူး ချာတိတ်ရာ…. သူကလေးကျောင်းတစ်ခါထဲ ကြိုခဲ့မယ်တဲ့… ကိုကြီးကိုပြောသွားတယ်” “အားးးး…မလာလဲ တော်ပါတော့နော်” “ချစ်လိုပါ ချာတိတ်ရယ်… ကိုကြီးကို ခွင့်ပြုပါနော်…. ခဏလေးပါ” ကိုကြီးက ပြောလဲပြော… လက်ကလဲ ကျမစောက်ဖုတ်လေးကို ဂါဝန်ပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေတာပေါ့… ကျမလဲ သူလုပ်သမျှ ရင်ခုန်လှိုက်မောစွာနဲ့ ခံယူနေမိတယ်…. ခဏနေတော့ ဂါဝန်လေးကိုလှန်လိုက်ပီး အောက်ကစတော်ကင်လေးပေါ်ကနေ ကျမအဖုတ်လေးကိုပွတ်တယ်…. “ချာတိတ်ရယ်…ချစ်တယ်ကွာ…” သူကဒီစကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောရင်း ကျမဖင်သားတွေကို နယ်လိုက်.. အဖုတ်လေးကို ပွတ်လိုက်နဲ့ ကျမမှာ သူအယုအယတွေကို မိန်းမူးနေအောင် ညှို့ယူဖမ်းစားနေတာပေါ့…. ခဏနေတော့ ကျမကိုဆွဲထူလိုက်တယ်… ကျမနဲ့ကိုကြီး မတ်တပ်လေး မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုကြီးက ကျမမျက်လုံးတွေ ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း…. “ခလေးဟိုဖက်လှည့်လိုက်နော်” တဲ့… ကျမကိုစိတ်ညှို့ပီးပြောလိုက်သလိုဘဲ…. ကျမလဲ ကိုကြီးပြောသလို သူ့ကို ကျောခိုင်းလှည့်လိုက်တယ်…
အဲအချိန်မှာ ကိုကြီးကကျမဆံပင်တွေကို အသာဖယ်ပီး နောက်ကနေ ကျမဂုတ်သားလေးတွေကို နမ်းစုပ်နေတယ်…. ကျမရင်တွေ အရမ်းခုန်နေသလို ဒူးတွေလဲ ညွတ်ချင်ချင်ဖြစ်နေပီလေ…။ “ချာတိတ်လေး….. ဖင်လေးနောက်ကော့လိုက်ပါ့လားကွာနော် ခလေး” ကိုကြီးဟာ ကျမကိုစိတ်ညှို့ထားသူတစ်ယောက်ကို အမိန့်ပေးသလို ခိုင်းစေနေတာ…… ကျမလဲ သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဖင်လေးကို နောက်ကော့ပေးလိုက်မိတယ်…. ကိုကြီးက ကျမကော့ပေးလားတဲ့ ဖင်လေးကို ဖွဖွလေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပွတ်ရင်း ဖင်သားလေးနှစ်ချမ်းကို ဖြဲလိုက် ပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ… ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲက အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာတဲ့အထိပေါ့…. ကျမဖင်လေးကိုကော့ပေးရင်း သမင်လည်ပြန်လေး ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ကိုကြီးက ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကိုစီးပြီး စုပ်နမ်းလိုက်တယ်.. ပီးတော့ သူဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ပီး သူလီးကြီးကိုထုတ်လိုက်တာ ကျမလှမ်းမြင်လိုက်တယ်…. ကျမစိတ်တွေ တအားလှုပ်ရှားနေပီး သူရှေ့ဆက်မှာကိုလဲ မတားဆီးမိတော့ဘူး…။ “ချာတိတ်လေး…” “ရှင်…ကိုကြီး….” ကျမအသံဟာ တာဝေးအပြေးသမားတစ်ယောက် ပန်းဝင်လာသလို အမောတကြီးဖြစ်နေတယ်လေ….။
“ချာတိတ်ဖင်ကြားထဲကို… ကိုကြီးလီးထောင်ချင်တယ်ကွာ…. နော်” ကျမနားထဲပူသွားသလို စိတ်တွေလဲ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်ကုန်တာပေါ့… “အင်း….ကိုကြီးသဘောကွာ” ကျမပြန်ဖြေပေမယ့် ကိုကြီးက လုံးဝကျမဖင်ကြားထဲကို သူလီးကြီး မထည့်သေးပါဘူး…… “ချာတိတ် ဖင်လေးကိုထပ်ကော့ပေးပါ့လား.. ကိုကြီးလီးနဲ့ ထောက်လိုကောင်းအောင်လို့နော် ချာတိတ်” ကိုကြီးက ထပ်ခိုင်းစေလိုက်သလို ကျမဂုတ်သားလေးတွေကိုလဲ သွားနဲ့မနာအောင် ကိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ… ကျမလဲ ဟင့်ကနဲ့ညီးညူသံနဲ့အတူ ဖင်ကိုထပ်ကော့ပေးလိုက်မိတယ်.. အား…. သူလီးကြီး ကျမဖင်ကြားကို ထောက်လိုက်တယ်……. ဒါပေမယ့် ဂါဝန်ကော စတော်ကင်ပါကြားခံနေတော့ ကိုကြီးလီးအနွေးဓါတ်က သိပ်မခံစားရဘူး… ဒါပေမယ့် ရင်ခုန်မှုကတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲ … စောက်ဖုတ်လေးဟာလဲ ဖောင်းကားပီး အရည်တွေ တအားထွက်နေပီပေါ့….. “ချာတိတ်ရယ်… ကောင်းလိုက်တာကွာ….. ဂါဝန်လေးလှန်လိုက်ပါ့လား…. အဲဒါမကိုကြီးလီးက ချာတိတ်ဖင်ကြားကို ပိုထိမှာလေ” “ဟုတ်…အား…အင်းကိုကြီးရာ….” ကျမလဲညီးညူရင်း ကိုကြီးခိုင်းသလို ဂါဝန်လေးကို လှန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ အောက်က စတော်ကင်အနီရဲလေးနဲ့ နောက်ကိုကော့နေတဲ့ ကျမဖင်လေးကိုမြင်နေရတယ်… ကိုကြီးက ကျမဖင်ကြားထဲကို သူ့လီးကြီးထည့်ရင်း စောင့်လိုက်တယ်.. ဒုတ်ကနဲ့ထိသလို ကျမပေါင်တွေကို ပွတ်သပ်ရင်း ပေါင်တစ်ဖက်ကို စွဲမပြီး ဒူးကွေးကာ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမဂွဆုံနေရာ စောက်ဖုတ်တည့်တည့်ကို ထောက်လိုက်တာ ကျမဒူးတွေ ညွတ်ကျသွားပါတော့တယ်…။
“ချာတိတ်လေး….လိုးရအောင်နော်…” ကျမနားထဲကို ဗုံးအလုံးပေါင်းများစွာ ပေါက်ခွဲလိုက်သလို ကိုကြီးစကားလုံးတွေက ၀င်ရောက်လာပါတယ်….. နားကတစ်ဆင့် ကျမဦးဏှောက်ကိုလဲ ခိုင်းစေလိုက်သလိုပါဘဲ ကျမခေါင်းအလိုလိုညိမ့်မိပါတော့တယ်……. “သွား ချာတိတ်လေး…. အခန်းထဲကို… ကုတင်ပေါ်ကနေ စောင့်နေနော်… ” တဲ့… ကျမဟုတ်တစ်လုံးထဲကလွဲပီး ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး…. ချက်ခြင်းဘဲ အခန်းထဲသွားဖို့ ကျမလုပ်လိုက်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကိုကြီးက ကျမလက်ကို ဆွဲထားလိုက်တော့ ကျမကြောင်ပီး သူကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘဲ…. ကိုကြီးက….။ “ဘယ်ကိုလဲချာတိတ်…ဘယ်သွားမလိုလဲ…” ကျမလဲချက်ချင်းဘဲ… “အခန်းထဲကိုလေ…ကိုကြီး” “ဘာသွားလုပ်မလိုလဲ အခန်းထဲကို….” ကျမ ကိုကြီးမေးတာကို အစကနားမလည်ဘူး…. “ကိုကြီးဘဲ အခန်းထဲကသွားစောင့်ဆိုကွာ….” စိတ်မရှည်စွာဘဲ ဖြေလိုက်တယ်… “အင်းလေ…ချာတိတ်ကလဲ… အခန်းထဲကို ဘာလုပ်ဖိုသွားမှာလဲ ပြောပါအုန်း ကိုကြီးကိုနော်…ချာတိတ်နော်လို့.. ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့…. သွားမှာမလား… ဟုတ်တယ်မလား ဟင်ချာတိတ်” ကျမလဲ ကိုကြီးစားလုံးတွေ အယုအယတွေအောက်မှာ နစ်မျောနေပါပီ…. ချက်ခြင်းဘဲ…. “ဟုတ်…ဟုတ်… ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့ အခန်းထဲသွားမလို့ပါ…” ကျမဒီစကားလုံးတွေကို နှုတ်ကလား.. ဦးဏှောက်ကလား…. ဘယ်ကထွက်လာတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်တောင် မသိတော့သလိုပါဘဲရှင်…. . ကျမအခန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့ ဂါဝန်နဲ့စတော်ကင်လေးကို ချွတ်ပီး ဘရာတစ်ခုထဲဝတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တက်ပီး ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့ အသင့်စောင့်နေလိုက်ပါတယ်…ခဏကြာတော့ ခန်းစည်းလိုက်ကာလေးလှပ်ပီး ကိုကြီးဝင်လာတယ်.. ကျမမျက်လုံးဒေါင့်ကနေ မြင်နေရတယ်…
ကိုကြီးကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာပီး ကျမအပေါ်ကနေ ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်ရင်း လက်ကကျောအောက်ကို လျှိုထည့်ကာ ဘရာဂျိတ်လေးတွေ ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်…. ကျမအလိုက်သင့်ကျောကော့ပေးရင်းကနေ ဘရာလေးကို ပင့်တင်ရင်း နို့တွေကို ငုံစုပ်ခံလိုက်ရတာဟာ ရင်တစ်ခုလုံး လစ်ဟာသွားသလို စောက်ပတ်ထဲကလဲ အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ယိုစီးကျလာပါတော့တယ်.. “အား….ရှီး….အ….ကိုကြီးအင်းးးးးးးးးးးးးးးး” ကျမ မပီမသစကားလုံး ဗလုံးဗထွေးတွေ ရေရွတ်ရင်း ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ကော့တက်နေသလို ကိုကြီးကလဲ ကျမနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ငုံလိုက် သှူ့လျှာကြီးနဲ့နို့သီးတွေကို ၀လုံးဝိုင်းသလို လုပ်လိုက် နည်းမျိုးစုံသုံးပီး ကျမကို ပြုစားနေပါတော့တယ်ရှင်….. တဖြေးဖြေးကိုကြီး အောက်ပိုင်းကိုဆင်းသွားကာ ကျမဗိုက်သားနဲ့ ချက်တွေကိုနမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ သူဘယ်ကို ဦးတည်နေတယ်ဆိုတာ ကျမသိနေပါတယ်……. ကျမဘ၀မှာ ကိုကြီးနဲ့တွေ့မှ စတင်ခံစားဖူးတဲ့ စောက်ဖုတ်အယက်ခံတဲ့အရသာကို ခံစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိက ရင်ထဲမှာကော အဖုတ်ထဲမှာပါ တလှပ်လှပ်နဲ့ ကြိုတင်ခံစားနေရပါတယ်….. “ချာတိတ်…” “ရှင်….ကိုကြီး…” ကျမမောဟိုက်တိုးညှင်းစွာထူးလိုက်ပါတယ်… “ကိုကြီး…ချာတိတ်စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်ချင်တယ်ကွာ….နော်” ကျမအဲလိုပြောတဲ့ ကိုကြီးစကားလုံးတွေအောက်ပါ ကျဆုံးနေရပါပီ…….. “အင်း….ကိုကြီးသဘော” လိုပြောလိုက်ပေမယ့် ကျမပေါင်အတွင်းသားလေးတွေကိုသာ သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့နမ်းရင်း ကျမစောက်ဖုတ်စီကို ရောက်လာလိမ့်နိုးမျှော်နေတဲ့ ကျမမျှော်လင့်ချက်ကတော့ မပြည့်သေးပါဘူး…. ကျမလဲ ဖင်ကိုကော့ရင်း ကိုကြီးပါးစပ်နဲ့ ကျမစောက်ဖုတ်လေးတွေထိအောင် လိုက်ရွေ့ပေးပေမယ့် ကိုကြီးက ဟိုဒီသာ ပြောင်းနေတယ်… ကျမစောက်ဖုတ်ကို လုံးဝမယက်သေးပါဘူး….။
ကျမ ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ဖြစ်နေပါပီ…. နောက်ဆုံး မခံစားနိုင်တော့ဘဲ….. “ကိုကြီး….အားဖြူစောက်ပတ်ကို ယက်ပေးပါတော့….” ကျမပေါက်ကွဲထွက်သွားပါပီ…. နှုတ်ကနေ အော်ဟစ်ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာ ကျမကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရဲ့လားလို့ ထင်မှတ်မှားလောက်အောင်ပါဘဲ…… “ယက်ချင်တာပေါ့ ချာတိတ်ရယ်….. ချာတိတ်စောက်ပတ်လေးကို ဖြဲပေးနော်… ကိုကြီးယက်ဖို့လေ..” ကိုကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ ကျမလဲ ချက်ခြင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဖြဲပေးလိုက်တယ်…… ကျမစောက်ပတ်ဖွေးဖွေးလေးဟာ အမွှေးအမြင်ကင်းစင်ပီး ကျမဖြဲလိုက်တဲ့အတွက် အစေ့လေးဟာ ပြူးထွက်လာပါတော့တယ်… ကိုကြီးက အဲဒီအစေ့လေးကို ချိုချည်စုပ်သလို တယုတယလေး ငုံစုပ်လိုက်တဲ့အခါ ကျမ လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသလို အရာအားလုံးဟာ ကိုကြီးရဲ့စောက်စေ့စုပ်ပေးနေတဲ့ အရသာအပေါ်မှာသာ အပြည့်အ၀ခံစားနေမိပါတော့တယ်…. “အင်း” ကျမလည်ပင်းကြောတွေထောင်ပီး ခေါင်းမော့ကာ အသက်ကို မနဲ့ရှူသွင်းနေရပါတယ်….. အစေ့လေးကို စုပ်နေရာကနေ ကျမစောက်ပတ်အ၀ လေးကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးစွမွှေနှောက်နေပါတော့တယ်…. ကျမအသက်ငင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို အသံပေါင်းစုံလည်ပင်းထဲက အစ်ထွက်၇င်း လူးလွန့်နေမီပါတော့တယ်..
“ချာတိတ်….လိုးရအောင်နော်….” ကိုကြီးကပြောလဲပြော ဘောင်းဘီကို အောက်ဆွဲချွတ်ရင်း ကျမပေါင်ကြားမှာ နေရာယူလိုက်ပါတယ်…….. “အင်း….လိုး….လိုးပါတော့…ဖြူကိုလိုးပေးပါတော့…” ကျမအရမ်းဆာလောင်နေပီလေ…. ဘာအရှက် ဘာအကြောက်တရားမှ မရှိတော့ပါဘူး……. ကိုကြီးလီးဒစ်ကြီးဟာ ကျမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားကို ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာသလို ကျမပေါင်တွေဟာလဲ သွေးသွားအလိုအရ အလိုလိုထောင်ကားသွားပါတယ်…. “အား……အင်း…..အားကိုကြီး” ကျမစောက်ပတ်ထဲမှာ အပြည့်အသိပ် လေဟာနယ်မရှိ…. အရသာပေါင်းများစွာ ပေးနေတဲ့လီးကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ချင်း ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာလိုက် ပြန်ထွက်သွားလိုက် ကျမစောက်ပတ်လေးဟာလဲ ဟာသွားလိုက် ပြည့်အင့်သွားလိုက်နဲ့ ကျမအောက်ကနေ ကော့တက်လိုက် ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့ စည်းချက်ကိုက်နေတာ ကိုယ်ဖာသာတောင် သတိမထားမိအောင်ပါဘဲ…. “ချာတိတ်လေး….” “ကိုကြီး….” “ကောင်းလားဟင် ချာတိတ်” “အရမ်းကောင်းတယ်..ကိုကြီးရာ” “ဘာကောင်းတာလဲဟင် ချာတိတ်” “ကိုကြီးလိုးတာလေ…. ဟိုးဖြူစောက်ပတ်ထဲက အရမ်းကောင်းတယ်” ကဲ အဲဒါကျမလားလို့တောင် မေးယူရမလိုဘဲ…. ကျမနှုတ်က ထွက်တာတွေဟုတ်ရဲ့လားတောင် မေးယူရမလိုပါ… “အင့်….အား….ရှီး…အား…အင့်အင့်အင့်” ကျမအသံပေါင်းစုံထွက်နေသလို ကိုကြီးကလဲ အပေါ်ကနေ လက်ထောက်ရင်း မှန်မှန်စောင့်လိုးနေပါတော့တယ်…
ကျမယောင်္ကျားဆို ဒီလိုအချက်တွေအများကြီး မလိုးနိုင်ပါဘူး….. ၁၀ ချက်လောက်လိုးလိုက် အချက် ၂၀ လောက်လိုးလိုက် နားလိုက်နဲ့ စပ်တငန့်ငန့်ကြီး……. ကိုကြီးကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး…. စလိုးကတည်းက တစ်ချက်မှ မနားဘဲ အချက်ပေါင်းများစွာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဘူး…… ကျမ ပီးသွားလိုက် ပြန်ကောင်းလာလိုက်နဲ့….“ကိုကြီး…တော်ပါတော့…ဖြူဒူးတွေတုန်နေပီ” ကျမတားယူတော့မ ကိုကြီးအလိုးရပ်ရင်း ကျမနို့တွေကို ငုံစုပ်ပေးနေတယ်… ခဏနေတော့ ကိုကြီးက သူ့လီးကြီးကို ကျမထဲကနေ ထုတ်လိုက်တယ်… ပီးတော့ ကုတင်အောက်ကို ဆင်းသွားတယ်…. ကျမလဲ ဘာလိုပါလိမ့်ဆိုပီး ကြောင်ကြည့်နေတုန်းမှာဘဲ….. “ချာတိတ်လေး….ကုတင်စောင်းမှာလိုးရအောင်နော်…” ကျမလဲခေါင်းညိမ့်ပြရင်း ကုတင်စောင်းကို လူရွှေ့ကာ ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ကုတင်အောက် တွဲလောင်းချထားလိုက်တယ်…… ကျမတင်က ကုတင်စောင်းမှာတင်နေတော့ စောက်ဖုတ်လေးက အထက်ကို ခုန်းထနေတာပေါ့… ကိုကြီးက အောက်ကို တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ကျမခြေထောက်တွေကို အသာလက်နဲ့မရင်း ကျမပေါင်ကြားကိုနေရာယူကာ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ပတ်လေးကို စလိုးပါတော့တယ်… “အား…ဖြေးဖြေးကိုကြီး…ထိတယ်..အရမ်းထိလို့” ကျမတောင်းပန်သံကို မကြားတာလား.
ဒါမဟုတ် ဂရုမစိုက်တာလားတော့မသိဘူး… ကိုကြီးက တစ်ချက်လေးမ မလျော့ဘဲ ဆက်တိုက် လိုးစောင့်နေပါတော့တယ်…. “အား….အား…အင်းအ…အ..အ…အ…. အား… အအ…. အ…. ကိုကြီး…အ….အင်း….“ “ချာတိတ် ကိုကြီးပီးတော့မယ်….” “ဟုတ်….ပီးလိုက်အ…အ..အား….အား…အ..အ….အ…” “ပီးတာသိတယ်မလားဟင် ချာတိတ်“ “အင်း…သိတယ်… အားးးအားးးအအအအ အအ” “ဘာလဲပီးတာ… သိတယ်ဆိုပြောကွာချာတိတ်”“အား…ကိုကြီးလရေတွေ…ဖြူစောက်ပတ်ထဲ… ပန်းထည့်တော့မှာလေ….အ…အာ…” “ဘယ်လိုလုပ်ပန်းထည့်မှာလဲဟင် ချာတိတ်လေးးးး” “အား…လိုးရင်း…လိုးအ…လိုးရင်းပန်းထည့်မှာလေးအားအားးးးး” ပြောဆိုလိုးညှောင့်နေရင်းကနေ ကိုကြီးလရေတွေ ကျမစောက်ပတ်ထဲကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ပန်းဝင် လာပါတော့တယ်…. ကျမပြောမပြတတ်အောင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပြီးမြောက်ခြင်းကို ရောက်သွားပါတော့တယ်ရှင်….. ကျမနဲ့ကိုကြီးတို့ဟာ အမြဲထိတွေနေရပေမယ့် အမြဲတန်းတော့ မလိုးဖြစ်ပါဘူး………. ကိုကြီးမအားတဲ့ခါတွေရှိသလို ကျမအမျိုးသားအိမ်မှာရှိနေတဲ့ အခါတွေမှာလဲ ကျမတို့ဟာ ခပ်တည်တည် ခပ်တန်းတန်းနေကြတာပါ…… ကျမနဲ့ကိုကြီး မတွေဖြစ်တာအခုဆို ၁၀ ရက်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပါပီ….. ကျမကို ကိုကြီးက ဖုန်းထဲကနေ အမြဲလိုလိုလှမ်းပီး သတိရကြောင်း တွေ့ချင်ကြောင်း ပြောနေပေမယ် လက်တွေမှာ အခက်အခဲတွေကိုယ်စီနဲ့မို့ဒီလိုဘဲ… မြင်သာမြင်မကျဉ်ရဆိုသလို နီးလျှက်နဲ့ ဝေးနေကြဆဲပါ……ပြီးး